Ukujonga okutsha kuApple Park Minecraft Edition | Ndisuka mac
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo sikubonise indaleko yeApple Campus 2, ngelo xesha yayingekabhaptizwa ngegama leApple Park, uguquko lwenguqulo ethile eyenziwe ngumsebenzisi esebenzisa iMinecraft. Kodwa ngelo xesha, wayesenokuninzi ekufuneka ekwenzile, ukusukela oko yayingama-50% ngaphezulu okanye ngaphantsi kwento awayefuna ukuyakha. UAlex Westerlund ngumthandi womdlalo weMinecraft okwangoku otyale imali ngaphezulu kweeyure ezingama-200 ngaphandle koncedo lweemods. Namhlanje sikubonisa ividiyo yakutshanje eposwe nguAlex kwiYouTube, ividiyo apho sinokubona ukuba imisebenzi yeApple Park iguqukele njani kuhlelo lwayo lweMinecraft.
Phezulu ungabona iziphumo emva kokusebenzisa ezi-4Iiyure ezili-13 zomsebenzi ukusukela ngoDisemba 2015, Umsebenzi waseTshayina, ukuba uyandivumela le ntetho. Le projekthi iqale njengokuzonwabisa, kodwa ngaphezulu kwenyanga ephelileyo uchithe ngaphezulu kweeyure ezili-166 ezama ukugqiba le projekthi yobuqu ngaphambi kokuba abafana baseCupertino bayivule. Uyilo luphela lwenziwe ngeXbox One, kucingwa kwasekuqaleni ukuba ingathumela iprojekthi kwifayile eza kwabelana ngayo nabasebenzisi, kodwa ngelishwa ayifumananga ndlela ngenxa yemida ebonelelwa liqonga likaMicrosoft malunga noku.
Iinkcukacha zoHlelo lweApple Park Minecraft
Ukuphindaphindwa kwinqanaba le-1: 1. Ngokwezicwangciso kwaye kungabalwa isigaba 2, indawo ekuhlalwa kuyo yiApple Park imalunga ne-620.000 yeemitha zesikwere
Yakhiwe ngesandla, ngaphandle kokusebenzisa iimodyuli.
Umhlaba uhlala ngokufanayo nezixhobo apho ikhoyo iApple Park.
Induli nganye, indlela okanye igadi ithembekile kwizicwangciso zokwakha, njengayo yonke imithi yetsheri kumdlalo.
Zonke izibonelelo zinikezelwe, nokuba yeyomthambo, indawo yokutyela, iiofisi.
Ukwenza olu lwakhiwo lukhulu, uAlex usebenzise ngaphezulu kwesigidi seebhloko
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ukujonga okutsha kuApple Park Minecraft Edition